I-Suertia yekhasino yaseSpain | Uphononongo, Slots, Amabhondi kunye namaxabiso, Isixhobo | ezemidlalo-e.top | Ukubheja kwezemidlalo
Ithunyelwe ngu admin ngaphakathi february 23, 2020 february 23, 2020
I-Lucky yekhasino: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhowudi eneKhowudi
Ukuba ujonga indlela eyahlukileyo yokukuphazamisa kunye nenye yeekhasino ozithandayo zokuzonwabisa, njengeekhasino ithamsanqa elungile kuwe.
Le yekhasino kwi-intanethi ineziqalo zayo ngaphakathi 2012, yintsapho yaseCatalan ethathe isigqibo sokuvula ikhasino kwaye kwakungekho de kuvunyelwe ngurhulumente ukuba le yinxalenye yomzi we-Intanethi.
ISuertia yenye yeekhasino eyaziwa kakhulu eSpain, ine ngaphezulu kwe 70 imidlalo yebhodi kwiqonga lakho elibonakalayo, Ujongano lwendawo yenye yeempawu ezifanelekileyo kwaye kufanelekile kakhulu ukuba nazo zibe negama lomsebenzisi kwaye zibe nezimvo zazo.
Ukunikeza abasebenzisi ibhonasi eyamkelekileyo kuxhomekeke kumdlalo abafuna ukungena ngawo ibhonasi 300 € 100%, into onokuyonwabela i-roulette ephilayo 60% yedipozithi, bryleta flash kunye abamnyama slots nje the 34% kuphela kwe 6%.
Kwicala lekhasino, ukunika abadlali ithamsanqa yenye inkunkuma yemali. 7%. isoftware yesoftware ephuhliswe nguMechrogaming. Ukugxila ekudaleni iindawo ezisebenzayo zokuqinisekisa ukuba abasebenzisi bayonwaba ngakumbi. Ilayisensi yakho enikezwe yi-DGOJ isebenza ngokusemthethweni eSpain.
Yazi ikhasino yeSuertia!
suertia.es iwebhusayithi ivela kwisandla se-quinielista Eduardo Losilla. Emva kweminyaka yokusebenza kwiifama kwaye ndiyabulela kumgaqo wokungcakaza kwe-intanethi eSpain, eyakhelwe ngaphakathi 2012 Iqonga lethamsanqa, kunye ne-quinielista iwebhusayithi. Ukubheja kwamasango kunye nemidlalo kukhule kakhulu ukusukela ngoko kwaye babandakanye iimveliso ezahlukeneyo ukufezekisa iimfuno zabasebenzisi bazo.
Le khasino, okubandakanya i-back back ye-Suertia Interactiva SA, yenye yezokuqala ukufumana ilayisensi yokudlala ekhutshwe yi-DgoJ. Namhlanje i-Suertia yekhasino ibonelela ngomxube odlisayo wemidlalo, kubandakanya oomatshini be-slot, imidlalo yebhingo, okuphumelela, umnyama kunye roulette, nokuba mbalwa ubomi. I-Microgaming, Umlilo okhawulezileyo kunye neMGA ngumboneleli ophambili wethamsanqa lomdlalo.
Kutheni ukhetha Luck?
Iminyaka yamava eenkonzo ezifanelekileyo zesertia ngenxa yesi sizathu ithathwa njengenye yeekhasino ezilungileyo eSpeyin, Yaba liqonga elikhuselekileyo nelinokuthenjwa le-intanethi elivumela abasebenzisi ukuba bonwabe kwaye badlale ngaphandle kwengxaki..
I-Suertia yenye yeendlela ezifanelekileyo, kuba yiportal yewebhu eyahlukileyo nehlukileyo phakathi kwabaninzi, Iphawuleka ngokujonga ingqalelo yomthengi wakho ukuqinisekisa amava awodwa kuyo yonke le nto ukuze uhlale ubuyela ekhasino yakho.
Inhlanhla 7 ukhetho lweedipozithi kunye ezintathu zokususa, Inesicelo esiselwayo esivumela abasebenzisi ukuba badlale ukusuka naphi na emhlabeni., okanye apho bakhoyo. Le yekhasino kwi-intanethi inemidlalo eyahlukeneyo kunye nokubheja kwezemidlalo.
Kwelinye icala i-suertia ikwabonelela ngebhonasi eyamkelekileyo evela 50% ye 300 €, kodwa abanazinyuselo kunye nokunikezelwa, ezinye zeempawu eziphambili zethamsanqa zezi:
U-Bet uhlala noSuertia
Ngethamsanqa vumela abathengi ukuba babheje ngokupheleleyo ekusasazeni kunye nokulandelela iziphumo zokubheja ngokusebenzisa i -core, evumela ukuba umthengi aziswe ngekhowudi yomsitho kunye nesiphumo sokugqibela.
Inhlanhla 100% ngokuqinisekileyo, evunywa ngabasebenzisi bayo ngenqaku le 10, Sebenzisa ubuchwephesha obukhuselekileyo ukukhusela ulwazi lomntu ngamnye lomntu ngamnye, ngengeniso encinci yabadlali bakho.
Yonke imidlalo ephuhliswa yinkampani yaseSweden Meicrogaming enikezelwe kuphuhliso loomatshini be-slot. Ngokuyintloko ezinikezelwe ekudaleni umdlalo opheleleyo.
Iindlela zokuhlawula ezanelisayo
ungafaka imali kwiakhawunti yakho ngenhlanhla yeVisa, I-Electron, Ukuhanjiswa kwebhanki ye-MasterCard okanye nkosi, kwelinye icala ungasebenzisa i-PayPal kunye nefolda yebhokisi yemali. Iintloko ziyahluka ngokuxhomekeka kwindlela yokuhlawula esetyenzisiweyo.
Iimpawu ekufuneka ziqwalaselwe ekukhetheni ithamsanqa
Ngaphambi kokukhetha i-yekhasino ye-intanethi njengethamsanqa yokubeka iibhendi zakho, Kuya kufuneka ukuba wazi amanqaku kunye nekhowudi ekufuneka idityanelwe kwaye ujonge enye ehlangabezana neemfuno zeemfuno zakho.
Ngesi sizathu, Ukuba ufuna ulwazi olungaphezulu malunga nekhasino kunye nezimvo ezinethamsanqa, Nazi ezinye zeempawu eziya kukunceda ukhethe amanqaku::
Ubume bakho ngokusemthethweni
ISuertia inelayisensi ekhutshwe liCandelo Jikelele lomdlalo, Eli phepha-mvume likuvumela ukuba uqhube nayiphi na imisebenzi yezomthetho eqhubeka kwi-intanethi yekhasino..
Iibhonasi kwaye zibonelela ngeSuertia
ISuertia inika abadlali ibhonasi eyamkelekileyo evela 50%, ukongeza koko kugxile kubasebenzisi kwaye bonwabele imbuyekezo yabadlali yebhonasi 7% ndibenayo.
Ngethamsanqa Le bhonasi inokufikelela nakwimifanekiso ye 300 €, ke bayaphulukana nayo iya kuba yinto ephantsi, kwelinye icala ukukhuthaza yekhasino kwi-intanethi kwenzelwa kuphela ukubheja kwezemidlalo, onokonwaba kuzo zombini iikhowudi zeselula kunye nesikhangeli.
I-Su Sutia inika abasebenzisi ibhonasi eyamkelekileyo ye 300 € ngaphezulu kwe 50%, Yintoni onokuyonwabela emva kwedipozithi yokuqala. Ukonwabela le khowudi yebhonasi kwaye kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi.
Iimeko zokuyonwabela le khomishini ngethamsanqa kuya kufuneka ushiye i 44% yemivuzo yokudlala iRoulette, bafumana kuphela i 56% nganye nganye.
Kwelinye icala, nangona uthathe inxaxheba kwi-Blackjack kuphela uya kufumana 34% yeziphumo, kodwa ukuba udlala slot ufumana kuphela i 10% yeziphumo.
I-Suertia ziikhasino ezidumileyo ze-intanethi, ngokovavanyo lwakho, amava abekwe kwinqanaba eliphezulu xa kuthelekiswa nezinye iikhasino eSpain. Ivumela abasebenzisi ukuba badlale kunye nokubheja ngekhowudi yokhuseleko kwaye banandiphe konke ukunyuswa kunye nokunikezelwa kunye nemibono.
Uninzi lwazo lukholelwa ukuba ukusilela kweklabhu ye-VIP evuza ukuthembeka kwabanye abathengi kwaye kufuneka ihlaziye iqonga le
Ngesicelo esiselwayo ungonwabela iinkonzo ezinikezelwa yiplatifomu yewebhu, kubandakanya imidlalo efana noomatshini be-slot, I roulette kunye nevidiyo. Isicelo siyahambelana nezixhobo ze-Android kunye ne-iOS, kwaye abasebenzisi banokonwabela ukukhushulwa, ukubonelela kunye neebhonasi kunye nekhowudi enikezela ngethamsanqa.
Le khasino ye-Intanethi ikhuselwe nguMthetho weOrganic 15/1999, eqinisekisa ukukhuselwa kweenkcukacha zakho, kwezinye iimeko, iqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzisi bayo ngenkonzo yokuzikhetha kunye nokubethelwa kwedatha..
Kwakhona, le yekhasino kwi-intanethi ine-uvavanyo lokuziphatha oluxanduva kunye namaphepha okunceda kwiingxaki. Kuba kubhekiswa kuphela kwingcaciso yolwazi lwewebhusayithi yanamhlanje, icela abasebenzisi ukuba bahlole ubudala babo.
Abasebenzisi beSuertia banokunxibelelana nabasebenzi besondlo kubathengi ngeendlela ezahlukeneyo, nokuba nge-imeyile, Ukutsala umnxeba okanye ngencoko yabukhoma ungabasebenzisi banokuphendula imibuzo yakho ngokuphendula imibuzo efanelekileyo imibuzo yeSeshini ngokukhawuleza.
Umbono wale ndawo uqalwe ngu-Eduardo Losilla quinielista, othe emva kokusebenza iminyaka emininzi kweli shishini wagqiba kwelokuba enze inguqu kwihlabathi lezemidlalo ukubheja, Iseshoni yokuxoxa esetyenziswa yinkampani iSuertia SA.
Le nkampani yenye yezokuqala ukufumana ilayisensi ekhutshwe yi-DgoJ, liqonga elinodlula 70 imidlalo
Gcina igama lam, i-imeyile kunye newebhu kwesi sikhangeli kwixesha elizayo xa ndiza kuphawula.
Izithuba ezinxulumene noko
1xBet Phila Ngoku 2012 1xbet yokubheja waqalisa ukwamkela ukubheja online. Ngoku 1xbet iye ukuba live de 500000 Abasebenzisi abangaphezulu kwe- 40 amazwe, Unikezelo 1xbet isebenza 365 / ngonyaka kunye 24/7. Funda ngakumbi…
1I-XBIT I-Spain 1XBIT yenye yezona zibheji zibalaseleyo kumazwe e-CIS, apho ndinamava amnandi. Ukongeza ekubeni yiplatform yemali, likhaya elifanelekileyo apho Funda ngakumbi…
Intshayelelo Enye yeekhasino ezidumileyo eYurophu yi-Unibet. Aba basebenzi basebenza ngokubheja kwezemidlalo kunye nemidlalo ye-kasino abanamaphepha-mvume ayimfuneko liCandelo eliBanzi lomdlalo., Funda ngakumbi…